किन हुदैछ बारम्बार रबि लामिछानेलाई गिराउने षड्यन्त्र ? के छ रहस्य – Rastriyapatrika
किन हुदैछ बारम्बार रबि लामिछानेलाई गिराउने षड्यन्त्र ? के छ रहस्य
rastriyapema | September 9, 2019 | Comments
रबि लामिछाने बिरुद्ध समय समयमा गिराउने खेल हुने गरेको छ। उनलाई नराम्रो देखाउन र गिराउन हुने गरेको खेल बिरुद्ध उनि राम्रो संग जानकार रहेका छन्। कहिले नेपाली हैनन् भनेर बिदेशी अमेरिकन भन्दै खेदो खन्ने काम भयो कहिले उनीबाट भएका साना त्रुटीलाइ लिएर बदनाम समेत गराउने कोसिस हुने गरेको छ। अहिले फेरि उनै रबिलाइ गिराउन कसैले पूर्व पत्नीको साहारा लिएको हो या पुर्बपत्नि कै आफ्नो दिमागको खेल हो भन्ने मा आसंका गरिएको छ।
राजीखुसीले सबै सम्पति लिएर छुत्तिएर अमेरिका पुगेका उनको पत्नीको आफ्नै चाल हो या अन्य कसैको बहकाब मा आएर उनलाई प्रयोग गर्ने रणनीति हो खुलेको छैन। रबि स्वयम्ले पनि आफ्नो पूर्व पत्नीलाई प्रयोग गरेर आफुलाई नराम्रो देखाउने कसैको चाल हो या उनकै आफ्नो काम हो भन्ने कुरामा पक्का हुन सकेका छैनन्। लामो समय देखि जनताको समस्या सुल्झाउन न्युज २४ मा सिधा कुरा जनता कार्यक्रम गरिरहेका उनले धेरै लाइ न्याय दिलाएका छन्।
अन्याय गर्ने धेरैलाई जेल पुर्याउने देखि लिएर समाजमा उनीहरुको पर्दाफास गर्ने गरेका छन्। तेसैले पनि तेसरी पर्दाफास भएका तत्व हरु दुस्मनमा परिणत भएको कुरा लाइ सजिलै बुझ्न सकिन्छ। अर्को तत्व भने उको चर्चा र नामले जल्ने हरु को पनि लामै लिस्ट छ। कसै गरि उनलाई गिराउन पाए भन्ने विचार लिने हरुको काम नहोला भन्ने पनि सकिन्न। जता ततै रबि लामिछानेको चर्चाले कसैको मनमा रिस नपलाउला भन्न सकिन्न। केहि समय पहिले उनलाई बिदेशी नागरिक भनेर खुबै चर्चा समेत भएको थियो। आफ्नो अमेरिका जस्तो सम्पन्न देशको रातो पासपोर्ट बुझाएर नेपाली नागरिक बनेका उनलाई गिराउन सम्मको खेल पनि हुन सक्छ।
आफ्नो सबै सम्पति सुम्पेर अदालात बाट कानुनि रुपमा २५ बर्ष लामो बैबाहिक सम्बन्ध टुंग्याएका उनले आफ्नो पूर्व पत्नीबाट यसरि आक्रमन हुन्छा भनेर सोचेका थिएनन्। तेसैले पनि रबि लामिछानेलाई यो षड्यन्त्र आफ्नै पुर्बपत्नि बाट हो या कसैको खेल भन्ने मा आसंका रहेको उनले लेखेको फेसबुक स्टेटस बाट नै प्रस्ट हुन्छ। अमेरिका जस्तो देशमा बसेका पूर्व पत्नी लाइ सम्पति सुम्पेर पनि भएका २ छोरीको जिम्मा सबै आफुले लिदा सम्म पनि रविले आफ्नो पिडा लुकाएर बसे। आफ्नो सम्बन्धका कारण आफ्नो सन्तानहरुको भबिस्यमा खेलवाड हुनसक्ने भन्दै उनिचिन्तित समेत देखिए।
राजी खुसीले आफ्नो सबै अधिकार लिएर पूर्व पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेपछि आफू अन्यायमा परेको भन्दै रविको कर्तुत सार्वजनिक गर्नका लागि पत्रकारहरुलाई गुहरेकोमा उनि अचम्मित बनेका छन्। साथै पत्रकारहरुलाई आफ्नो वारेम राम्रो नराम्रो सबै कुरा जान परे खोजीनिती नगर्न बरु सोधे आफुले सबै बताइदिने समेत प्रस्ट पारेका छन्। यसरि समय समयमा रबि लाइ बदनाम गराउन हुने गरेको काम आखिर बारम्बार किन दोहोरिरहेको छ ? यो सबै जनताको प्रश्न बनेको छ।
४ स्वर्ण जित्दै नेपाली छोरी गाैरिकाले रचिन् इतिहास
‘बुवाले खाडीमा संघर्ष गर्नुभो, मैले स्वर्ण जितेँ’ : तेक्वान्दो खेलाडी काजल श्रेष्ठ
करातेमा स्वर्ण जितेपछि सुनिताले बुवालाई अगाँलो हालेर रोइन् , स्वर्ण उनले बुवालाई पहिर्‍याइदिइन्